Madaxweyne Muusa Bixi oo cafis u fidiyay 360 maxaabiis - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Muusa Bixi oo cafis u fidiyay 360 maxaabiis
Madaxweyne Muusa Bixi oo cafis u fidiyay 360 maxaabiis
Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegto madaxweyne uu maanta soo saaray cafis ugu fidiyay Maxaabiis, kuwaas oo ku jira Xabsiyada kala Duwad ee Soomaaliland.
Wareegtada ka soo baxayday Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliland ee summadeedu tahay JSL/XM/WM/222-857/052022, uu Cafis Guud u fidiyey Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan.
Tirada maxaabiista uu cafiska u fidiyey madaxweyne Muuse Biixi ayaa gaaraya illaa 360 (Saddex Boqol iyo Lixdan) maxbuus.
Halkaan hoose ka akhriso wareegtada kasoo baxay madaxweyne Biixi
Markaan Arkay: Dastuurka Somaliland, Qodobka 90aad, Farqadiisa 5aad;
In laga bilaabo taariikhda maanta aan Cafis u fidiyo, munaasibadda ciidda Fidriga awgeed maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan, oo tiradoodu dhan tahay 360 (Saddex Boqol iyo Lixdan) maxbuus. Cafiskani saamayn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo raad ciqaabeedka, ka dhalanaya dembiyadda ay ku xukunnaayeen. Waxa cafiskan fulinaya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee, iyada oo la raacayo liiska Maxaabiista.